भारत बन्यो विश्वमा सबैभन्दा बढी हतियार किन्ने देश::kamananews
भारत बन्यो विश्वमा सबैभन्दा बढी हतियार किन्ने देश
नयाँदिल्ली । हतियार किन्ने सन्दर्भमा भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी हतियार किन्ने देश बनेको छ ।
भारतीय पत्रिका दैनिक भाष्करका अनुसार स्टक होमको रिपोर्टले सन् २०१३–२०१७ को अवधिमा भारतले सर्वाधिक हतियार किनेको जनाएको छ । भारतले कूल हतियार ब्यापारको १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । रिपोर्ट अनुसार २००८–२०१३ को तुलनामा भारतले २०१३–२०१७ सम्म २४ प्रतिशत बढी हतियार किनेको छ ।
साउदी अरब दोस्रो नम्बरमा
रिपोर्ट अनुसार भारतपछि सबैभन्दा हतियार किन्ने देश साउदी अरब बनेको छ । त्यसपछि क्रमशः मिश्र, यूएई, चीन, अस्ट्रेलिया, अल्जेरिया, इराक, पाकिस्तान र इन्डोनेसिया रहेका छन् ।
रिपोर्ट अनुसार भारतले रुससँग सबैभन्दा बढी हतियार किनेको छ । भारतले किनेको हतियारमध्ये रुसबाट ६२ प्रतिशत हतियार किनेको पत्रिकाले जनाएको छ । भारतले अमेरिकाबाट १५ र इजरायलबाट ११ प्रतिशत हतियार किनेको छ ।
अमेरिका भारतसँग नजिक
एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावका कारण अमेरिका भारतलाई साथ दिइरहेको पत्रिकाले जनाएको छ । २००८–२०१२ को तुलनामा २०१३–२०१७ सम्म भारतले अमेरिकाबाट धेरै हतियार किनेको छ । तुलनात्मक अवधिमा भारतले अमेरिकाबाट लगभग ५५७ प्रतिशत बढी हतियार किनेको छ ।
हतियार बेच्ने देशको सूचिमा अमेरिका अग्रस्थानमा रहेको छ । अमेरिकापछि रूस, फ्रान्स र जर्मनी बढी हतियार बेचिरहेका छन्। हतियार बेच्ने देशको सूचिमा चीन पाँचौं नम्बरमा छ । चीनले सबैभन्दा बढी हतियार पाकिस्तानलाई बेच्ने गरेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बाट अन्य
विदेशीहरूको यौन प्यासको लागि शिविरबाटै बेचिन्छन् रोहिंग्या किशोरी
रोहिंग्या समुदायका किशोरीलाई विदेशीहरूको यौन प्यास मेट्ने साधन बनाइएको छ बंगलादेशका विभिन्न शरणार्थी शिविरमा रहेका म्यानमारका किशोरीहरूलाई देहव्यापार गर्न बाध्य पारिएको खुलासा भएको छ । बिबिसीले गरेको एक अनुसन्धानले सो खुलासा गरेको हो । म्यानमारको...
चीनमाथि अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाउने !
काठमाडौं, ८ चैत । चीनविरूद्ध अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाउने तयारी थालेको छ । बीबीसीका अनुसार अमेरिकी व्यवसायको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्नेलाई प्रोत्साहन दिएको भन्दै डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले चीनविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने तयारी थालेको हो । यो मुद्दामा...
भूकम्प गयो के -के लाई असर पर्यो त ?
ताइवानमा ५.२ रिक्टरस्केलको भूकम्प काठमाडौं– दक्षिण पश्चिम ताइवानको चियायी क्षेत्रमा मंगलबार बिहान भूकम्प गएको छ । चियायीबाट ३०.७ किलोमिटर दक्षिण पूर्व केन्द्रबिन्दु भएर ५.२ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । भूकम्पको झड्का चियायीका साथै...
फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति सार्कोजी पक्राउ, अकुत सम्पत्ति जम्मा पारेको आरोप
पेरिस (एजेन्सी)– फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी पक्राउ परेका छन्। राजनीतिक अभियानका लागि गरेको अर्थ संकलनको स्रोत नखुलेको भन्दै मंगलबार बिहान उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले उनीमाथि दिवंगत भइसकेका लिबियाली पूर्वशासक कर्णेल मुअम्मर गद्दाफीबाट अवैधानिक...
भारत शोकमा डुब्यो, इराकमा ३९ नागरिकको मृत्यु
नयाँ दिल्ली, ६ चैत – इराकको मोसुल सहरबाट हराएका ३९ भारतीय नागरिक आतंककारी संगठन आइएसआइएसको हातमा मारिएको पुष्टि भएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजले संसद् बैठकमा यसको पुष्टि गरेकी हुन् । २०१४ मा भारतबाट...
अन्तरीक्षबाट खस्ने ढुंगाले पृथ्वी ध्वस्त पार्नसक्ने वैज्ञानिकको चेतावनी
एजेन्सी । नासाका वैज्ञानिकहरुले अब आउने शताब्दीमा अन्तरीक्षबाट भयनाक ढुंगा पृथ्वी तर्फ आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले उक्त भयानक ढुंगा आकारमा अत्यन्त ठूलो भएका कारण हालसम्मका वैज्ञानिक उपकरणहरुले रोक्न सकिने सम्भावना कम...
संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिकी गोप्य पत्नी, उमेरमा छन् ३० वर्ष कान्छी
एजेन्सी। संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति मानिने भ्लादिमिर पुटिन चौथो पटक रुसका राष्टपति बनेका छन् । उनी संसारभर आफ्नो कडा व्यवहार र फिटनेसका कारण जति चर्चित छन् उत्तिकै उनको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा धेरैलाई निकै कम...